Kitra any Eoropa : lasan’i Ciro Immobile ny «Soulier d’or» | NewsMada
Kitra any Eoropa : lasan’i Ciro Immobile ny «Soulier d’or»
13 taona aty aoriana, niverina eo am-pelatanan’ny mpilalao italianina indray ny «Soulier d’or», ho an’ireo mpilalao baolina kitra namono baolina be indrindra, tamin’ireo fifaninanam-pireneny avy. Nandrombaka izany i Ciro Immobile, milalao ao amin’ny Lazio Roma, izay mifaninana ao amin’ny “Serie A”. 35 ny isan’ny baolina ma­tiny, tamin’ireo fihaonana 36 tamin’ity taom-pilalaovana 2020 ity.
Raha atao ny antontanisa, saika mahafaty baolina hatrany i Ciro tamin’ireo lalao na­trehiny.
Tsiahivina fa ny taona 2007 no nahazo izany i Fan­cesco Totti, mpilalaon’ny AS Roma.
Mitana ny laharana faharoa i Robert Lewandowski, ao amin’ny Bayern Munchen, mi­faninana amin’ny “Bun­desliga”. Nahatratra 34 ny isan’ny baolina tafidiny tamin’ny lalao 31 natrehiny. Any amin’ny laharana fahatelo ko­sa ilay Portiogey, i Christiano Ronaldo, mpanafika ao amin’ny Juventus de Turin. Baolina 31 no matiny tamin’ ireo lalao 33 natrehiny, tamin’ ny “Serie A”.
Fahadimy kosa ilay Ar­zan­tin, i Lionel Messi irakiraka mpanafika ao amin’ny FC Barcelone. Tsy nahafaty afa-tsy baolina 25 izy, teo amin’ny “La Liga”. Fahafito, i Ro­melu Lukaku, ilay kongoley mizaka ny zom-pirenena bel­za, milalao ao amin’ny Inter de Milan. Nahafaty baolina 23 izy. Any amin’ny faha-11 i Pierre Emerick Aubameyang, ao amin’ny Arsenal, izay na­mono baolina 22, tamin’ireo lalao 36 natrehiny
Raha tsiahivina, anisan’ireo nifantenana ireo mpilalao nahatafiditra baolina be in­drindra ny fifaninanana any Ita­lia na ny «Serie A». Eo koa ny «Bundesliga» ho an-dry zareo any Alemaina. Ny “La Liga” any Espaina, ny “Pre­mier League” any Angletera, ny “Ligue 1” any Frantsa, ra­ha tsy hitanisa afa-tsy ireo, izay tena malaza sy be mpanaraka indrindra.